Gas စျေး - အွန်လိုင်း GAS ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Gas (GAS)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Gas (GAS) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Gas ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $18 012 211.00
volume_24h_usd: $11 654 900.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Gas တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Gas များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
GasGAS သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.69GasGAS သို့ ယူရိုEUR€1.43GasGAS သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.29GasGAS သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.54GasGAS သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr15.19GasGAS သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.10.64GasGAS သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč37.27GasGAS သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł6.29GasGAS သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$2.25GasGAS သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$2.36GasGAS သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$37.97GasGAS သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$13.13GasGAS သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$9GasGAS သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹126.88GasGAS သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.284.94GasGAS သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$2.32GasGAS သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2.55GasGAS သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿52.58GasGAS သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥11.75GasGAS သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥178.92GasGAS သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩2007.89GasGAS သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦654.68GasGAS သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽123.67GasGAS သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴46.87
GasGAS သို့ BitcoinBTC0.000145 GasGAS သို့ EthereumETH0.00425 GasGAS သို့ LitecoinLTC0.0285 GasGAS သို့ DigitalCashDASH0.0185 GasGAS သို့ MoneroXMR0.019 GasGAS သို့ NxtNXT135.5 GasGAS သို့ Ethereum ClassicETC0.23 GasGAS သို့ DogecoinDOGE467.69 GasGAS သို့ ZCashZEC0.0178 GasGAS သို့ BitsharesBTS64.72 GasGAS သို့ DigiByteDGB64.99 GasGAS သို့ RippleXRP5.56 GasGAS သို့ BitcoinDarkBTCD0.0577 GasGAS သို့ PeerCoinPPC5.68 GasGAS သို့ CraigsCoinCRAIG763.08 GasGAS သို့ BitstakeXBS71.42 GasGAS သို့ PayCoinXPY29.23 GasGAS သို့ ProsperCoinPRC210.12 GasGAS သို့ YbCoinYBC0.0009 GasGAS သို့ DarkKushDANK537 GasGAS သို့ GiveCoinGIVE3624.62 GasGAS သို့ KoboCoinKOBO368.81 GasGAS သို့ DarkTokenDT1.56 GasGAS သို့ CETUS CoinCETI4833.09
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 18:30:02 +0000.